चिनको अनौठो चर्तिकला : जिउँदो स’र्प र’क्सीमा हालेर स्नेक वाईन ! चीनको यो हर्कतले विश्वभर खुबै आ’लोचना - Nepal Insider
चिनको अनौठो चर्तिकला : जिउँदो स’र्प र’क्सीमा हालेर स्नेक वाईन ! चीनको यो हर्कतले विश्वभर खुबै आ’लोचना
March 15, 2020 901
काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र चीनको खानपानको शैलीले धेरैलाई जिब्रो टोक्ने नै बनाउँने गर्छ । चीन अनौठो– अनौठो परिकार खानको लागि बिश्वभरमा नै प्रचलित छ । केहि समय अगाडी चीनमा नै भर्खरै जन्मेको तर मृ’त्यु भईसकेको बच्चाको सुप खाएको तस्बिर र भिडियो भाईरल भएको थियो । केही समय अगाडी चीनको अर्काे भिडियोले सनसनी म’च्चाएको छ । जुन भिडियोको खुबै आ’लोचना पनि भईरहेको छ । र’क्सीको बोटलमा जिउँदो स’र्पलाई हाली मा’रेको भिडियोले सर्बत्र आ’लोचना पाएको थियो ।
र’क्सी बनाउँने यो पारम्पारिक तरिकाले बनाईएको र’क्सी चीनमा निकै मिठो हुने भन्दै यस किसिमको र’क्सीको माग पनि निकै हुने गरेको छ । भिडियोमा कोबरा स’र्पलाई चामलबाट बनेको र’क्सीमा हालेर बोटल बन्द गरिएको छ । बन्द बोटलभित्र केहि समयपछि स’र्पको ज्या’न जान्छ । अनि चीनका मानिसहरु त्यो र’क्सीलाई निकै मिठो मानेर खाने गर्दछन् । यतिमात्र होईन चीनका मानिसहरु कुकुर, बिरालो, गो’ही लगायतका जनावरको मा’सु पनि निकै मन पराउँने गर्छन् ।
Prevकोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन सार्कका नेताहरुको भिडियो कन्फरेन्स शुरु (लाइभ)
Nextपाँचखालमा माटो खन्ने क्रममा सैयौं वर्ष पुरानो बागेश्वर मञ्जुश्रीको मूर्ति फेला, सम्पदा संरक्षण गर्न माग